एलेफोन R8 स्मार्टवाच विश्लेषण, धेरै थोरैको लागि धेरै ग्याजेट समाचार
आज हामी तपाईलाई उत्पादनको बारेमा एकदमै रोचक समीक्षा दिन्छौं जुन हामी प्रयोग गर्न उत्सुक छौं। स्मार्टवाचेस अझै पनि ग्याजेटहरू मध्ये सबैभन्दा खोजिएको हो आज हाम्रो मोबाईलको साथ एक उत्तम खेल पूरा गर्न। हामी केहि दिनको लागि स्मार्टवाच जाँच गर्न सक्षम छौं Elephone, the R8, र हामी यसलाई मन परायो।
हस्ताक्षर टेक संसारमा इलेफोन अब अज्ञात छैन। धेरै स्मार्टफोन मोडेलहरूलाई धन्यवाद छ जुन कठिन एन्ड्रोइड बजारमा एक पाइला हासिल गर्न सफल छन्, तिनीहरूका बाँकी उत्पादनहरू प्रचार कार्यको एक भागको साथ आएका छन्। एलेफोनको स्मार्टवाच हामी पहिले भएको पुष्टि गर्न आइपुग्छ गुणवत्ता उत्पादनहरू अविश्वसनीय मूल्यहरूमा.
1 एक स्मार्टब्यान्डको मूल्यमा एक पूर्ण स्मार्टवाच
2 अनबक्सि Ele एलेफोन R8 स्मार्टवाच
3 एलेफोन R8 को लागी "शीर्ष" डिजाइन गर्नुहोस्
4 ठूलो र बहुमुखी डायल
5 इलेफोन R8 डाटाशीट
एक स्मार्टब्यान्डको मूल्यमा एक पूर्ण स्मार्टवाच
जब हामी स्मार्टवाचलाई गम्भीरताका साथ विचार गर्छौं, हामी जहिले पनि बजारमा हेर्छौं हामी कुन मूल्य दायरामा सार्न सक्छौं। पक्कै पनि, गतिविधि ब्रेसलेट धेरै विकसित भएको छ हालका वर्षहरूमा। र त्यहाँ केहि मामिलाहरूमा, क केही स्मार्टब्यान्ड र स्मार्टवाचहरू बीच प्रायः अवस्थित भिन्नता.
बजार अलि विश्लेषण गर्दै, R8 भन्दा धेरै उच्च मूल्यको साथ बजारमा गतिविधि रिस्टब्यान्ड्स पत्ता लगाउन यो सजिलो छ एलेफोन द्वारा। दुबैले प्रस्ताव गरेको सुविधाहरू र कार्यक्षमता विश्लेषण गर्दा, तिनीहरू अझै महँगो हुन्छन्, किनकि उनीहरूसँग घडी भन्दा कम छ। यसका लागि, र अधिकको लागि हामी एलेफोनबाट खुशीको साथ आश्चर्यचकित भएका छौं R8 स्मार्टवाच।
गुण र मूल्य बीच सन्तुलन खोज्दै उत्पादको केहि एक चीज हो जुन सबै उत्पादकहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन्। र सबै उपभोक्ताहरू फेला पार्न चाहन्छन्। इलेफोन छ धेरै नजिक टाउकोमा कील हिर्काउन R8 स्मार्टवाच संग धेरै कारणका लागि। यस्तो पूर्ण घडी र सँगै धेरै राम्रो देखिन्छ यो अधिक निर्माण हुनेछ यदि यो अर्को निर्माताबाट आएको हो। एलेफोन R8 पट्टी उच्च सेट गर्न आइपुगेको छ र यहाँ तपाईं उसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ छुट र प्रचारात्मक उपहारको साथ
अनबक्सि Ele एलेफोन R8 स्मार्टवाच
यदि हामी यस स्मार्टवाचको स्लिम बाकस भित्र हेर्छौं भने हामीले आशा गरेका सबै कुरा पाउँछौं। को हेर्नुहोस् अग्रभाग मा देखा पर्छ स्ट्र्याप अनसम्म्बल संगयद्यपि यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीलाई केहि सेकेन्ड मात्र लिन सक्दछ। जब हामी यस हातको डायल हाम्रो हातहरू बीचमा लिन्छौं, तब हामी याद गर्छौं कि हामी न्यूनतम उच्च गुणको उत्पादनको सामना गरिरहेका छौं।
हामी संग चुम्बकीय पिनको साथ केबल चार्ज गर्दै स्थिर र सुरक्षित जडान। हामीले तिनीहरूलाई जडान गर्न कुनै प्रयास गर्न आवश्यक पर्दैन किनकि ती सजिलैसँग राखिएको छ। हामी केबलको लागि वाल चार्जर हराउन सक्छौं, जुन बाकसमा समावेश छैन। त्यसोभए हामीलाई USB पोर्ट वा अर्को चाहिन्छ जुन हामीसँग पहिले नै छ। र अन्तमा हामी केहि पाउँछौं वारेन्टी कागजात र छोटो उपयोगकर्ता गाइड.
एलेफोन R8 को लागी "शीर्ष" डिजाइन गर्नुहोस्
कुनै श .्का बिना एलेफोनको स्मार्टवाच डिजाइन यसको एक शक्ति हो। र हामी यसलाई हेर्नेछौं यसको विशिष्टताहरूसँग जुन केवल एक मात्र होइन। हामीसँग घडीबाट सुरु हुन्छौं गोलो डायल, केहि चीज जसमा समर्थकहरूको समान अवरोधकहरू छन्। एक साथ क्षेत्र आकार जुन हामी "ठूलो" मान्न सक्छौं को एक आकार संग 1,28 इन्च। यस्तो घडी खोज्नको लागि आदर्श होइन जुन सानो छैन, तर सानो कलाई सहितको लागि धेरै ठूलो छ।
La डायल धातु मिश्रित सामग्रीबाट बनेको हुन्छ एक समाप्त संग र स्पर्श को लागी साँच्चै रमाईलो छ। एक ठुलो हेराईका लागि पोलिश गरिएको किनाराहरू र उनीहरूको वजन छ कि यसले हामी प्रतिरोधी र गुणात्मक उत्पादनको सामना गरिरहेका छौं भनेर देखाउँदछ। सफ्टवेयर र ईन्टरफेस कि एलेफोन यस आर 8 मा लागू गरीएको छ सम्पूर्ण स्क्रीन क्षेत्र को पूर्ण लाभ लिन को लागी बनाउँछ.
गोलाको किनारहरूमा हामी फेला पार्दछौं एकल बटन, बाँया पट्टि अवस्थित छ, जो विपरित हातले सजिलैसँग पहुँचयोग्य छ। टच स्क्रीन छ हामीले बनाएका इशाराहरूको आधारमा बिभिन्न विकल्पहरू यसको बारेमा। एक स्पर्शको साथ हामी स्क्रिन सक्रिय गर्न सक्छौं, केही चीज जुन हामी पनि समय जाँच्नलाई नाडीलाई इशाराको साथ गर्न सक्छौं।
मा पछाडि भागक्षेत्र को एक छ मुटुको दर मोनिटरको लागि सेन्सर। यसको आकार दिईयो, यसले कुनै पनि समयमा संवेदनशीलता हराएको बिना नै द्रुत पठन गर्दछ। तल्लो क्षेत्रमा छन् चार्जका लागि "पिनहरू" ब्याट्री को, जहाँ हामी टिप्पणी गरे, चार्जर एक सरल र कुशल तरीकाले जोडिएको छ।
एलेफोन R8 खरीद गर्नुहोस् प्रोमोशनल उपहार र छुटको साथ आधिकारिक वेबसाइटमा
विशेष उल्लेख योग्य छ एलेफोन R8 पट्टा। यसमा राख्नु यो वास्तवमै सजिलो छ र / वा यसलाई सानो ट्याबलाई धन्यबाद हो जुन क्षेत्रको छेउमा छ। केहि चीज जसले सम्भव बेल्ट परिवर्तन गर्दछ अझ सजिलो। हामीले यसमा रहेको स्पर्शलाई मन पराएका छौं, यसको छाला र यसको निर्माणको लागि प्रयोग गरिएको सामग्रीको हल्कापनमा कत्ति राम्रो महसुस हुन्छ। केहि चीज जुन यसको सुदृढ रूप र भावनामा कुनै प्रभाव पार्दैन।
ठूलो र बहुमुखी डायल
पहुँच गर्न बिभिन्न मेनू विकल्पहरू एलेफोन R8 द्वारा प्रस्ताव गरिएको हामी चार सम्भावित दिशाहरूमा स्क्रिनमा स्लाइड गर्न सक्छौं। यदि हामी स्लाइड माथिबाट तल हामी द्रुत मेनुमा पहुँच गर्दछौं जसमा हामी "गडबड नगर्नुहोस्" मोड, "मेरो फोन फेला पार्नुहोस्" वा ब्राइटनेस स्तर, अन्य सेटि amongहरू मध्ये जुन हामी हाम्रो लागि अधिक उपयोगी हुनेहरूको साथ पनि अनुकूलित गर्न सक्छौं चयन गर्न सक्छौं।
यदि हामी स्लाइड दाँया देखि बाँया हामी सम्बन्धित जानकारी प्राप्त गर्दछौं स्वास्थ्य। हामी गतिविधि क्रममा (चरण, दूरी र क्यालोरी) हाम्रो विकास देख्न सक्छौं। यस समयमा हाम्रो मुटुको धडकन पढ्ने प्राप्त गर्नुहोस् वा हाम्रो निद्राको मात्रा र गुणवत्तामा डेटा परामर्श लिनुहोस्। स्लाइडि तल देखि माथि सम्म हामी परामर्श गर्न सक्छौं सबै सूचनाहरू जुन हामीले स्मार्टवाचमा प्राप्त गर्न कन्फिगर गरेका छौं।
अन्त्यमा, स्लाइडि दाँया देखि बाँया हामी पहुँच प्राप्त गर्नेछौं मुख्य मेनू र विकल्पहरू घडी को। संगीत, समय जानकारी, स्टपवाच र अधिक सेटिंग्स को लागी उपकरण सेटिंग्स नियन्त्रण गर्नुहोस्। सम्भावनाहरूको पूर्ण सूची एलेफोन R8 को रूपमा चलाउनुहोस् सब भन्दा चाखलाग्दो विकल्प मध्ये एक पल
इलेफोन R8 डाटाशीट
स्क्रिन 1.28 "
रिजोल्युसन 360 X 360 पिक्सेल
पानी / धुलो प्रतिरोध IP68
ब्याट्री 280 mAh
स्वायत्तता प्रयोगको days दिन सम्म
र्याम मेमोरी 128 एमबी
आयामहरू 15.4 x 10.3 x 2.4 सेमी
मूल्य 42 10 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् इलेफोन R8
उत्तम र इलेफोन R8 को सर्वश्रेष्ठको बारेमा कुरा गर्नु अघि यसबारे केही कुरा गर्न उचित देखिन्छ अनुप्रयोग प्रयोगको। हामीले सँधै टिप्पणी गरेका छौं कि निर्माताको आफ्नै अनुप्रयोगले कुनै पनि उपकरणको उपयोगितामा सुधार ल्याउँछ। तर यस पटक हामीले कसरी हेर्‍यौं con एक तेस्रो पक्ष अनुप्रयोग पनि एक उपकरण को सक्दो फाइदा लिन सक्छ यो जस्तो। धेरै राम्रो सिnch्क्रोनाइजेसन र FitCloudPro अनुप्रयोगको साथ हाम्रो डिस्पोजलमा विकल्पहरूको संख्या।
विकासकर्ता: 黄 黄
El डिजाइन एलेफोन R8 को यो एक वास्तवमै आकर्षक स्मार्टवाच बनाउँछ र एक दिन्छ प्रिमियम लुक.
को भवन निर्माण सामाग्री दुबै धातुई धातु क्षेत्र र यसको पट्टा सिलिकॉन।
धेरै विस्तृत सूची कन्फिगरेसन विकल्पहरू र प्रयोगका सम्भावनाहरू।
कुनै श .्का छैन मूल्य यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो जुन यो प्रस्ताव गर्दछ।
१.२1,28 इन्च आकार भएको गोलाकार स्क्रिन राख्नुहोस् ठूलो घडी हुन सक्छ केही anatomies को लागी।
तौल धेरैलाई एकरूप हुनको लागि मनपर्दछ, यो धेरै हल्का उपकरण खोज्नेहरूको लागि अवरोध हुन सक्छ।
उहाँमा भर पर्दैन चार्जिंग एडेप्टर विद्युत् प्रवाहको लागि यो एक सानो गल्ती हो।
कुनै चार्जर छैन
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » इलेफोन R8 स्मार्टवाच समीक्षा